मेरो थाङ्ने बातले रसिकको भात हिउँ (सास रहन्जेल आस रहने) | मझेरी डट कम
मेरो लामो कुराइपछि रसिक आए । उनको संस्मरण लेखनको प्रसङ्ग कोट्ट्याएँ । सम्झेको हरफहरू फलाक्दै उनलाई हौसलाले सक्दो उचालेँ ।
“तपाईँहरूकै हौसलाले गर्दा लेख्ने जाँगर चल्छ ।” उनले कृतज्ञता जाहेर गरे ।
“टङ्क ढकालले मन्त्री पड्काउँदा दाजुको त मौका आएन नि ?” मैले उनको मन बुझ्ने जुक्ति निकालेँ ।
“ज्ञानेन्द्र राजनीतिज्ञ होइन रै’छ । फलामलाई काट्ने फलामै चाहन्छ भन्ने कुरा उसले लागु गर्न सकेन । माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएकोे भए माओवादीलाई ठीक लाउन मदत मिल्थ्यो । अब कहाँ जगत गौचन, निक्ष शमशेरलाई पो मन्त्री बनाएको । टङ्क ढकाल मन्त्री हुँदा जिएम माग्नु आफू जानु भएन । भाउजुुले पनि मन गरेन । कोसिस पनि गरिनँ ।”
केदारनाथ (मेरो मामालीदाजु) को कुरा (ज्ञानेन्द्र केको राजनीति गर्दो रै’छ र ! जम्मै तासको घरजस्तो अवस्था रै’छ, कसो त्यसले मार हानिनु परेन) र मञ्जुलको कुरा (प्रश्रित चैँ मन्त्री अरे आफू चैँ म्यानेजर) जस्तो उनीबाट पनि सुन्न पाएँ ।
उनले मेरो धारावाहिक वक्तव्य चुपचाप भई सुनेपछि बोले, “कागजको गणतन्त्रले के गर्ने ? दुई तिहाई बहुमत कहाँदेखि आउने ?” आँत हारिरहेको भए पनि बाहिर कहिहाल्नु भनेको विरोधीको आत्मबल उकास्नु नै हो । त्यति हुस्सू र लत्त छाडिहाल्ने प्रवृत्तिको व्यक्तित्व उनी होइनन् । त्यही राजसंस्थाको जयगान घन्काउँदा दरबारिया कलाकार र साहित्यकार ठहरिई पटकपटक संथानहरूको जिएम पड्काएर मान र धन आर्जन गरेको र दरबारिया सरसङ्गत गरेको उनी जत्तिको प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले अहिले नै राजसंस्थाको कटाक्ष नगर्नु स्वाभाविक हो । ज्ञानेन्द्रले चल्ने ढङ्ग मात्र नपुर्याएको भन्दै सीमित रहनुमा नै उनले कल्याण ठाने ।
ज्ञानेन्द्रको खनखत्रो विरोध भएको ठानी त्यसलाई कम गर्ने सोचले मैले कुरा मिलाएँ, “ज्ञानेन्द्रले पनि ककसको कुरा सुनोस् । असफल भएपछि तुलसी गिरीे पनि ‘कमल थापाको कुुरा मात्र सुनी राजाले काम बिगार्यो’ भन्ने । कति जनाको चित्त बुझावोस् बिचरा ! राजाले शक्ति हात लिएको सुरुवातमा मेरो मामालीदाजु केदारनाथ भन्नु हुन्थ्यो कि अँ ! माओवादीलाई पनि ठेगान लाउने गतिलो राजा त बल्ल पाइयो । पछिबाट उहाँ पूरै गणतन्त्रवादी । पशुपति शमशेरले नै पो राजासँग टेक लिने परेछ भन्ने म तर्क गर्थेँ । आफू वीरेन्द्रको सम्धी हुने मौका ज्ञानेन्द्रले चुकाइदिएकोमा पशुपति शमशेरले ईख राखेको मैले ठानेको थिएँ । तर केदारदाजु भन्नु हुन्थ्यो— कहाँ त्यो पशुपति त खुट्टा कमाउँछ । डेग छाड्लाउ भनी हामी नै खबरदार गर्छौँ । परेको घरी राजावादी एक हुनु पर्नेमा (ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिनुको साटो) उसैको खेदो गर्ने । २०४६ सालअघि पञ्चहरू फुट्नाले पनि पञ्चायत कमजोर भएको थियो । थापा गुट र चन्द गुट, मरिचमान र ल्वाङमान गुट हरे ।”
“सिद्धान्तवादी कम्युनिस्टहरू त विभाजित हुन्छ । पञ्चहरू त झन् व्यक्तिवादी राजनीति गर्ने हुँदा फुट्ने नै भो । अहिले पनि टुक्रैटुक्रा छ ।” राजावादीमा भएको फुटमा उनले चित्त बुझाउने कुरा गरे ।
कुमार फुदुङ माओवादी विधायक बन्न मञ्जुर भएको कारण मैले बताएँ, “उपरथीसम्म भएको मलाई लिम्बूको बच्चा भएकैले त महारथी बनाए न नि । महारथी हुनुलाई राणा, शाह, बस्नेत वा थापाकै बच्चा हुनु पर्ने भनेर उ असन्तुष्ट भइरँ‘दा माओवादीको समावेशी नीतिले उसलाई छाप पार्यो ।”
“ज्ञानेन्द्रको पछि लागेर खैरियत छैन भन्ने रमेशनाथ पाण्डेजस्तो अवसरवादीहरूलाई राष्ट्रवादी भन्दै फकाएर राजावादीको शक्ति कमजोर बनाई आफूमा शक्ति थप्ने माओवादी नीति हो, ”मैले जवाफ दिएँ ।
गोपाल किरातीको बारे उनले तर्क काटे, “पार्टी नै गाभ्नु हुने थिएन । त्यसो गर्दा दार्हानङ्ग्रा फुकालेको बाघजस्तो उ शक्तिहीन भयो । त्यसमा पनि पूरै पार्टीलाई ल्याउन उसले सकेन । अहिले गोपाल अस्तित्वहीन भो ।”
“उसले अन्य सिद्धान्त पढेकै छैन । एकहोरो त्यो एउटै सिद्धान्त घोकेपछि त त्यसमा खप्पिस हुने नै भो । हृदयचन्द्रले धेरै पढेको कहाँ हो र ! बिएको पाठ्यक्रममा उसले लेखेको किताब पढ्नु पर्छ । गोपाललाई पनि गार्हो छ । उ गाउँमा छिरिसक्नु छैन अरे, ”मेरो मूल्यांङ्कनलाई उनले खण्डन गरे ।
मैले बुुज्रुक हुँदै कहेँ, “ज्ञानेन्द्रको कदमबाट सबभन्दा धेर फाइदा चीनले लियो । महेन्द्रले त बन्द गर्न नसकेको तिब्बत स्वतन्त्र गर्ने उदेश्यले लाजिम्पाट स्थित दलाई लामाले खोलेको कार्यालय ज्ञानेन्द्रले झ्याप्पै बन्द गर्योे । त्यसको बदला ३ करोड रुपियाँको सैनिक सहायतामा नै उसले चित्त बुझाउनु पर्यो । त्यै कदमबाट भारत र अमेरिका बिच्कियो ।”
“एक जना सोझोे न सोझो लाहुरे (भवानी राई) किन जनआन्दोलनमा दौडिन्छ भनेको त अहिले उ जनजातिको नेता हुनुलाई पो रै’छ । न विद्यार्थी जीवनमा उ नेता भई हिँडेको । हुन त जे भए पनि उसको बाबु पञ्चायत कालमा १६—१७ वर्ष गाउँको प्रधानपञ्च भएको मान्छे र ५२ पगरीवालाको छोरा हो । जनजातिलाई कोटा चाहिने हरे । कोटामा परेर नेता हुने आशा उसको होला ।” हग्नेपाद्ने नेता हुने हालको युवाप्रवृत्तिप्रति मैले टिप्पणी गरेँ ।
“कोटा त कोनि कोठा चैँ पाउँछ कि ?” उनले पनि ओल्च्याए । हाम्रो आरिसे कुरा ती युवाहरूको कानमा परे हामीले गोदाइ खानु बेर छैन । बेरोजगार, विदेश गएर दुःख गर्ने जाँगर नभएका र विद्यार्थीजीवनमा राजनीतिक अनुभव बटुलेका र स्वाद चाखेका केही हुनेखाने जनजातिका छोराहरू २०६१—६२ सालको जनआन्दोलनपछि ठुटे नेता भएर अलमलिएको देख्दा मलाई पो सुर्ता लाग्छ ।
लोडसेडिङले बिजुली रोकिइ अन्धकारले गुर्लुम्मै छोप्यो । मेरो बिस्वादिलो गफले चाख हराएर उनी निदाएको मैले बुझेँ । उहीले भाउजू तरुनी हुँदा मात्र बात मार्दामार्दै मान्छेकै सामु खुट्टा बोकाउने स्वभावका उनी बुढ्यौलीतिर घचेटिइसक्दा पनि भाउजूलाई हात बोकाएको देख्दा म छक्क परेँ ।
बिजुली आएर उज्यालो छताछुल्ल फिजियोँ । रसिक उठेर मास्टरबेडरुमतिर लागे । म पनि त्यहाँ पसेँ । थुरको टुप्पामा विचारमग्न भएर बसेको एउटा चराको तस्विर र त्योसँगै भएको शब्दहरू उनले देखाउँदै फलाके, “यो चरा स्वतन्त्र छ । पिँजडामा छैन तर पनि त्यो पीडित छ । त्यसैले यसले अहिले स्वतन्त्रताको पीडा भोग्दै छ । त्यस्तै इलाममा म चिया बगानको मालिक छु । म नै सर्वेसर्वा र स्वतन्त्र तर पनि मसँग बेग्लै खाले पीडा छ ।” त्यो ‘स्वतन्त्रताको पीडा’ (पछिबाट ‘स्वधिनताको पीडा’ फेरे) उनले बनाउदै गरेका गीतसङ्ग्रहको नाम छ ।
“हामी त खाना खानु थाल्नु पर्यो । कि यतै खाउँ तपाईँ पनि ।” उनले औपचारिकता पुर्याए ।
उनी भोलि इलाम हिँड्ने मान्छे । के के तयारी गर्नु र सोच्नु पर्ने थियो । मैले अनावश्यक गन्थन लम्ब्याएर बाधा पुर्याइरहेको हुन सक्थेँ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यति अबेर सम्ममा उनलाई भोकले सताएको हुन सक्थ्यो । पाकेको भोजन खाउँ भन्दा म नखाने र उनले खानु थाल्नु पनि मैले गफले अलमल्याइरहेको थिएँ । उनको लागि म क्या भाम्लो आइलागेको थिएँ, ओ हो हो !
उनको निजी कोठाबाट हामी सिटिङरुममा सरिसकेको । बिचरा ! उनी बोल्दै थिए, “अब फेरि हाम्रो भेट कहिले होला नि ?” मैले थोत्रो गन्थन गरेर उनलाई घण्टौँ अलमल्याई दिक्दार गरेको र माघको जाडोमा भोको पेटमा तातोतातो खाना हाल्न उनलाई वञ्चित गराई भात हिउँजस्तो चिसो बनाएको कुराहरू सहेरै पनि उनले त्यस्तो प्रतीक्षित वचन निकालेको घटनाले आली काट्ने मेलोमा म अचानक निस्कँदा हेलुवाको सीतासोल्टीनीले उहिले यसो भनेकी वचनको याद दिलाई मलाई खुसी बनायो, “आउँदाजाँदा बाटो नकाट्नु होसै सोल्टी ।”
“तपाईँको कथा ‘सन्तवीर गाउँमा छैन’ गजबको थियो ।” ढोकाको जाली खापाको बाहिर भर्याङको टाउकोमा उभ्दै अर्को प्रसङ्ग कोट्ट्याएँ ।
“त्यो साँच्चै लाहुरेपरिवारमा घट्न सक्ने घटना हो ।” भोकले दाप भएको पेटसँग उनी फेरि कुरा गर्न सुरिए । प्रशंसा भातभन्दा स्वादिलो हुने नै पर्यो । म दस औँली हात जोड्दै पछि सर्दै बल्ल सिडीँबाट भुइँमा झरेँ । मलाई थोरै पनि भोक लागेको थिएन । उनको भात हिउँ बनाउने कोक्ल्याँटो व्यवहार गरेकोमा पछुतोले घोचिँदै मोटरबाइक चलाउने तरखरमा लागेँ ।
२०६४ फागुन ३